Isicelo-China Beihai Fiberglass Co., Ltd.
1.Ukwakha kunye noKwakha
I-fiberglass inikezela ngeenzuzo zamandla aphezulu, ubunzima bokukhanya, ukumelana nokuguga, ukumelana nelangatye elungileyo, i-acoustic kunye ne-thermal insulation, kwaye ke isetyenziswa ngokubanzi kwicandelo lokwakha nolokwakha.
Izicelo: ikhonkrithi eyomeleleyo, iindonga ezidityanisiweyo, iifestile zesikrini kunye
Umhombiso, i-FRP imivalo yentsimbi, igumbi lokuhlambela kunye neendawo zangasese, iiphuli zokudada, iintloko zentloko, iipaneli zokukhanyisa emini, iithayile ze-FRP, iiphaneli zomnyango, njl.
I-fiberglass inikezela ngoncedo lozinzo lwendalo, ukusebenza kakuhle kokuqina, ubunzima bokukhanya kunye nokumelana nomhlwa, kwaye ke yinto yokuzikhethela kwimathiriyeli yezixhobo.
Izicelo: imizimba yebhulorho, izibuko, ulwakhiwo lwamanzi, uhola wendlela kunye nemibhobho.
3.Umbane kunye ne-Elektroniki
I-fiberglass inikezela ngeenzuzo zokufakwa kombane, ukumelana nokubola, ukufudumeza ubushushu kunye nobunzima bokukhanya, kwaye ke ngenxa yoko kukhethwa kakhulu kwicandelo lombane kunye neletroniki.
Ezezicelo: iibhodi zesekethe eziprintiweyo, izixhobo zombane zombane, iibhokisi zokutshintsha izixhobo, ii-insulators, izixhobo zokwambathisa izixhobo, ii-cap zokuphela kweemoto kunye nezinto zombane, njl.
Ukuchasana kweChemical Corrosion
Fibreglass inikezela ngeenzuzo zokumelana nokulungela umhlwa, isiphumo esihle sokuqinisa, ukuguga kunye nokumelana nelangatye, kwaye ke isetyenziswa kakhulu kwicandelo lokumelana nokubola kwemichiza.
Izicelo: iinqanawa zeekhemikhali, iitanki zokugcina, i-anti-corrosive geogrids kunye nemibhobho.
Xa kuthelekiswa nezinto zemveli, iimveliso ze-fiberglass zinezibonelelo ezibonakalayo ekuzimiseleni, ukuxhathisa ukubola, ukuxhathisa i-abrasion kunye nokunyamezela kwe-thermal, kwaye iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zezithuthi zobunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwayo kwezothutho kuyanda.
Izicelo: imizimba yeemoto, izihlalo kunye nemizimba yoololiwe abakhawulezayo, isakhiwo somzimba, njl.
6. Indawo yasemoyeni
I-fiberglass eqinisiweyo yindibaniselwano ineenzuzo zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukunganyangeki kwempembelelo kunye nokudodobala kwelangatye, okuvumela izisombululo ezininzi ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa kwicandelo le-aerospace.
Izicelo: ii-radomes zenqwelomoya, iinxalenye zeerofoil kunye nomgangatho wangaphakathi, iingcango, izihlalo, iitanki zepetroli ezincedisayo, iinxalenye zeenjini, njl.
7. Ukonga umbane kunye nokuKhuselwa kokusiNgqongileyo
I-fiberglass inikezela ngeenzuzo zokulondolozwa kobushushu, ukufakwa kwe-thermal, ukusebenza kakuhle kokuqinisa kunye nobunzima bokukhanya, okwenza ukuba ibe yinto ebalulekileyo kumbane womoya kunye nobunjineli bokukhusela indalo.
Izicelo: iincakuba zomoya ojikelezayo kunye neehood, iifeni zokukhupha, iijografi, njl.
8. Ezemidlalo kunye noLonwabo
Fibreglass inikezela ngeenzuzo zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ubhetyebhetye obuphezulu bokuyila, ukuqhubekeka ngokugqwesileyo, ukungqinelani okuphantsi kunye nokumelana nokudinwa okuhle, kwaye ke isetyenziswa ngokubanzi kwimidlalo nakwezolonwabo.
Ezezicelo: iitafile ze-tennis, i-battledores (i-badminton rackets), iibhodi ze-paddle, i-snowboards, iiklabhu zegalufa, njl.